အခြို့သော ဘုနျးကွီးတှဟော ( အားလုံးကိုမဆိုလို ) ဒီမိုကရစေီရရှိသှားမှာ စိုးရိမျကွောကျရှံ့ပွီး စဈအာဏာရှငျလကျအောကျမှာပဲ အဘယျကွောငျ့ နခေငျြကွတာလဲ ...?
၁။ ဒီမိုကရစေီခတျေ ရောကျသှားရငျ လူတှကေ အသိဉာဏျ ပညာပိုပွီး မွငျ့လာမယျ။ အမွငျတှေ ပိုကယျြလာမယျ။ ဘယျအရာဟာ ဘုရားဟော အစဈအမှနျဖွဈတယျ။ ဘယျအရာဟာ ဘုရားဟောမဟုတျပဲ ဘုနျးကွီးက သူ့ရဲ့အတ်တလောဘတှနေဲ့ သူလိုရာစှဲပွီး ရောသမ မှထေားတဲ့ ဂငျြးတရားတှဖွေဈတယျဆိုတာကို ကောငျးကောငျးခှဲခွားလာနိုငျမယျ။ အကွောငျး အကြိုး၊ အကောငျးအဆိုး၊ အမှားအမှနျ၊ အကြိုးရှိ/မရှိတှကေို ကိုယျပိုငျဉာဏျနဲ့ ခှဲခွားစိတျဖွာလာနိုငျတဲ့ ဝိဘဇ်ဇဉာဏျတှေ ရငျ့သနျလာပွီး ဘယျအရာဟာ ဓမ်မစဈ၊ ဘယျအရာဟာ ဓမ်မမှနျဖွဈတယျ၊ ဘယျအရာဟာ အဓမ်မဝါဒဖွဈတယျဆိုတာ ကောငျးကောငျး ဝဖေနျ ပိုငျးခွားလာနိုငျမယျ။ အဲဒီလိုဉာဏျ ရငျ့သနျလာရငျ အရငျကလို ဘုနျးကွီးပွောသမြှ ခေါငျးမငွိမျ့တော့ဘူး။
မှားတယျမှနျတယျ၊ အကြိုးရှိတယျ မရှိဘူး ခှဲခွားစိတျဖွာပွီး ဘုနျးကွီးကို မေးခှနျးတှေ ပွနျမေးတော့မယျ။ အရငျကလို ဖွီးလို့ ဖွနျးလို့ ခွိ မျးခွောကျလို့ မရတော့ဘူး။ လူတှမေေးတာတှေ ဖွနေိုငျဖို့ စာမြားမြားဖတျရတော့မယျ။ လလေ့ာမှုတှေ သငျယူမှုတှေ အရငျကထကျ ပိုမိုလေးနကျစှာ ကယျြပွနျ့စှာ လလေ့ာ သငျယူရတော့မယျ။ အခြောငျနေ အခြောငျစား မရတော့ဘူး။ ၂။ အာဏာရှငျခတျေမှာ စဈအာဏာရှငျနဲ့ တညျ့အောငျပေါငျးနိုငျရငျ စဈအာဏာရှငျကို မွှောကျပေးပွီး ဓမ်မကိုအဓမ်မ၊ အဓမ်မကိုဓမ်မလို့ မြားမြားပွောပေးနိုငျရငျ မြားမြားဘုနျးကွီးမယျ။ ခမျြးသာမယျ၊လိုတရဖွဈမယျ။ တိုငျးပွညျအာဏာကို သနေတျနဲ့ မတရားအနိုငျကငျြ့ သိမျးပိုကျထားကာ တိုငျးပွညျရဲ့ သယံဇာတမှနျသမြှ မတရားခိုးယူထားပွီး မိစ်ဆာဇီဝနဲ့ အသကျမှေးဝမျးကွောငျး ပွုထားမှနျး သိပါလကျြ ထိုစဈဗိုလျခြုပျ သူခိုးကွီးမြားကို နညျးမှနျလမျးမှနျ ဓမ်မနှငျ့အညီ မဆုံးမရဲပဲ “ရှေးဘဝကုသိုလျကံကောငျးလို့ အခုလိုခမျြးသာကွီးပှားနတော” ဆိုပွီး အမွှောကျတရားဟောတယျ။ ဒီလောကျခိုးဆိုး သတျ ဖွတျနသေူတှကေို နတျပွညျရောကျမယျ၊
နိဗ်ဗာနျရောကျမယျတှနေဲ့ အမွှောကျတရားတှဟေောတယျ။ ဟိုကသဘောကတြော့ ခိုးထားတဲ့ပစ်စညျးတှနေဲ့ မြားမြားလှူတယျ။ မြားမြားလှူတော့ ကားအကောငျးစား၊ ကြောငျးအကောငျးစား၊ ဇိမျခံပစ်စညျးအပွညျ့အစုံနဲ့ ကွိုကျသလို စညျးစိမျခံစားပွီး နနေိုငျတယျ။ စညျးစိမျတောမှာ ယဈမူးသှားကွတဲ့ ဘုနျးကွီးတှဟော ဒီမိုကရစေီကို မလိုခငျြဘူး။ စဈအာဏာရှငျလကျအောကျမှာပဲ ဆကျပွီးနခေငျြကွတယျ။ ၃။ စဈအာဏာရှငျတှဟော သူတို့ကို မတျောလှနျရငျပွီးရော၊ နိုငျငံရေး မလုပျရငျပွီးရောဆိုပွီး ဘုနျးကွီးတှေ မကောငျးတာမှနျသမြှ ကွိုကျတာအကုနျ လုပျခှငျ့ပွုတယျ။ သူတို့ရအောငျ စညျးရုံးသိမျးသှငျးပွီး အခှငျ့ရေးမြိုးစုံပေးကာ ဖကျြဆီးကွတယျ။ ကြောငျးတိုကျတှထေဲမှာ နှဈလုံး၊ သုံးလုံးခြဲထီ၊ ဘောလုံးလောငျးပှဲတှေ၊ ဖဲဝိုငျးတှေ၊ သဈမှောငျခို၊ မူးယဈမှောငျခိုစသညျ့ မကောငျးတာတှကေို အလုံးစုံ လုပျခှငျ့ပေးထားတယျ။
ဒီလိုအခြောငျနေ အခြောငျစား ဘုနျးကွီးတှဟော ဒီအခှငျ့အရေးတှေ ဒီမိုကရစေီခတျေမှာ မရနိုငျတော့ဘူးဆိုတာကို သိနကွေလို့ ဒီမိုကရစေီ မလိုခငျြကွဘူး။ ၄။ ပွီးခဲ့တဲ့ငါးနှဈ ပွညျသူ့အစိုးရလကျထကျ မန်တလေးမွို့မှာ သာသနာသနျ့ရှငျးရေးအဖွဈ ကြောငျးတိုကျတှထေဲက နှဈလုံး၊ သုံးလုံး၊ ဘောလုံး၊ ဖဲဝိုငျး၊ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြား ဖယျရှားပဈလိုကျတာကို ထိုအခြောငျနဘေုနျးကွီးမြားကမကွိုကျကွပါ။ အာဏာရှငျလကျအောကျ ရနတေဲ့ အခှငျ့အရေးတှေ ပြောကျဆုံးသှားလို့ ဒီမိုကရစေီတိုကျပှဲဝငျသူမြားကို ရနျလုပျစကားမြားပွောကာ စဈအာဏာရှငျတှကေို အားပေး အားမွှောကျ ပွုနကွေခွငျးဖွဈတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ စဈအာဏာရှငျတှေ အာဏာ သိမျးတဲ့နကေ့ ပြျောပွီးတော့ (ထ က)တဲ့ ဘုနျးကွီးတှေ၊ ပြျောလို့ဆိုပွီး ကြှေးမှေးပှဲတှေ လုပျခဲ့တဲ့ဘုနျးကွီးတှေ ရှိခဲ့တယျ။
ပွောရမညျဆိုလြှငျ မြားစှာကနျြပါသေးတယျ ။ သခြောတာကတော့ ဗုဒ်ဓရဲ့အဆုံးအမအတိုငျး မနခေငျြသူမြား၊ စညျးစိမျရဈနသေူမြား၊ ရငျထဲမှာ ဓမ်မအစဈ အမှနျ မရှိဘဲလိမျညာလှညျ့ဖြား ဂငျြးတရားဟောပွီး ဂငျြးထညျ့လိုသူမြား၊ လောငျးကစားမြိုးစုံနဲ့ ပြျောပါးပွီး အခြောငျနလေိုသူမြားဟာ ဒီမိုကရစေီခတျေရောကျရငျ ထိုအခှငျ့အရေးမြား ဆုံးရှုံးသှားမညျကို သိနပေါသောကွောငျ့ ထိုဘုနျးကွီးမြားသညျ ဒီမိုကရစေီကို မလိုခငျြကွပါ။ စဈအာဏာရှငျလကျအောကျမှာသာ ပြျောပြျောကွီး နလေိုကွသူမြားသာ ဖွဈပါသညျ။ ဆားနညျးနညျး ပကျလိုကျသညျ အနာရှိသူမြား စပျကွစသေတညျး။
crd-မငျးသုည ( ဗုဒ်ဓတက်ကသိုလျ)
အချို့သော ဘုန်းကြီးတွေဟာ ( အားလုံးကိုမဆိုလို ) ဒီမိုကရေစီရရှိသွားမှာ စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့ပြီး စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာပဲ အဘယ်ကြောင့် နေချင်ကြတာလဲ …?
၁။ ဒီမိုကရေစီခေတ် ရောက်သွားရင် လူတွေက အသိဉာဏ် ပညာပိုပြီး မြင့်လာမယ်။ အမြင်တွေ ပိုကျယ်လာမယ်။ ဘယ်အရာဟာ ဘုရားဟော အစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်။ ဘယ်အရာဟာ ဘုရားဟောမဟုတ်ပဲ ဘုန်းကြီးက သူ့ရဲ့အတ္တလောဘတွေနဲ့ သူလိုရာစွဲပြီး ရောသမ မွှေထားတဲ့ ဂျင်းတရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းခွဲခြားလာနိုင်မယ်။ အကြောင်း အကျိုး၊ အကောင်းအဆိုး၊ အမှားအမှန်၊ အကျိုးရှိ/မရှိတွေကို ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ ခွဲခြားစိတ်ဖြာလာနိုင်တဲ့ ဝိဘဇ္ဇဉာဏ်တွေ ရင့်သန်လာပြီး ဘယ်အရာဟာ ဓမ္မစစ်၊ ဘယ်အရာဟာ ဓမ္မမှန်ဖြစ်တယ်၊ ဘယ်အရာဟာ အဓမ္မဝါဒဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကောင်းကောင်း ဝေဖန် ပိုင်းခြားလာနိုင်မယ်။ အဲဒီလိုဉာဏ် ရင့်သန်လာရင် အရင်ကလို ဘုန်းကြီးပြောသမျှ ခေါင်းမငြိမ့်တော့ဘူး။
မှားတယ်မှန်တယ်၊ အကျိုးရှိတယ် မရှိဘူး ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီး ဘုန်းကြီးကို မေးခွန်းတွေ ပြန်မေးတော့မယ်။ အရင်ကလို ဖြီးလို့ ဖြန်းလို့ ခြိ မ်းခြောက်လို့ မရတော့ဘူး။ လူတွေမေးတာတွေ ဖြေနိုင်ဖို့ စာများများဖတ်ရတော့မယ်။ လေ့လာမှုတွေ သင်ယူမှုတွေ အရင်ကထက် ပိုမိုလေးနက်စွာ ကျယ်ပြန့်စွာ လေ့လာ သင်ယူရတော့မယ်။ အချောင်နေ အချောင်စား မရတော့ဘူး။ ၂။ အာဏာရှင်ခေတ်မှာ စစ်အာဏာရှင်နဲ့ တည့်အောင်ပေါင်းနိုင်ရင် စစ်အာဏာရှင်ကို မြှောက်ပေးပြီး ဓမ္မကိုအဓမ္မ၊ အဓမ္မကိုဓမ္မလို့ များများပြောပေးနိုင်ရင် များများဘုန်းကြီးမယ်။ ချမ်းသာမယ်၊လိုတရဖြစ်မယ်။ တိုင်းပြည်အာဏာကို သေနတ်နဲ့ မတရားအနိုင်ကျင့် သိမ်းပိုက်ထားကာ တိုင်းပြည်ရဲ့ သယံဇာတမှန်သမျှ မတရားခိုးယူထားပြီး မိစ္ဆာဇီဝနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုထားမှန်း သိပါလျက် ထိုစစ်ဗိုလ်ချုပ် သူခိုးကြီးများကို နည်းမှန်လမ်းမှန် ဓမ္မနှင့်အညီ မဆုံးမရဲပဲ “ရှေးဘဝကုသိုလ်ကံကောင်းလို့ အခုလိုချမ်းသာကြီးပွားနေတာ” ဆိုပြီး အမြှောက်တရားဟောတယ်။ ဒီလောက်ခိုးဆိုး သတ် ဖြတ်နေသူတွေကို နတ်ပြည်ရောက်မယ်၊
နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်တွေနဲ့ အမြှောက်တရားတွေဟောတယ်။ ဟိုကသဘောကျတော့ ခိုးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ များများလှူတယ်။ များများလှူတော့ ကားအကောင်းစား၊ ကျောင်းအကောင်းစား၊ ဇိမ်ခံပစ္စည်းအပြည့်အစုံနဲ့ ကြိုက်သလို စည်းစိမ်ခံစားပြီး နေနိုင်တယ်။ စည်းစိမ်တောမှာ ယစ်မူးသွားကြတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေဟာ ဒီမိုကရေစီကို မလိုချင်ဘူး။ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာပဲ ဆက်ပြီးနေချင်ကြတယ်။ ၃။ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ သူတို့ကို မတော်လှန်ရင်ပြီးရော၊ နိုင်ငံရေး မလုပ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီး ဘုန်းကြီးတွေ မကောင်းတာမှန်သမျှ ကြိုက်တာအကုန် လုပ်ခွင့်ပြုတယ်။ သူတို့ရအောင် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းပြီး အခွင့်ရေးမျိုးစုံပေးကာ ဖျက်ဆီးကြတယ်။ ကျောင်းတိုက်တွေထဲမှာ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံးချဲထီ၊ ဘောလုံးလောင်းပွဲတွေ၊ ဖဲဝိုင်းတွေ၊ သစ်မှောင်ခို၊ မူးယစ်မှောင်ခိုစသည့် မကောင်းတာတွေကို အလုံးစုံ လုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်။
ဒီလိုအချောင်နေ အချောင်စား ဘုန်းကြီးတွေဟာ ဒီအခွင့်အရေးတွေ ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကို သိနေကြလို့ ဒီမိုကရေစီ မလိုချင်ကြဘူး။ ၄။ ပြီးခဲ့တဲ့ငါးနှစ် ပြည်သူ့အစိုးရလက်ထက် မန္တလေးမြို့မှာ သာသနာသန့်ရှင်းရေးအဖြစ် ကျောင်းတိုက်တွေထဲက နှစ်လုံး၊ သုံးလုံး၊ ဘောလုံး၊ ဖဲဝိုင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖယ်ရှားပစ်လိုက်တာကို ထိုအချောင်နေဘုန်းကြီးများကမကြိုက်ကြပါ။ အာဏာရှင်လက်အောက် ရနေတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ပျောက်ဆုံးသွားလို့ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင်သူများကို ရန်လုပ်စကားများပြောကာ စစ်အာဏာရှင်တွေကို အားပေး အားမြှောက် ပြုနေကြခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် စစ်အာဏာရှင်တွေ အာဏာ သိမ်းတဲ့နေ့က ပျော်ပြီးတော့ (ထ က)တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ၊ ပျော်လို့ဆိုပြီး ကျွေးမွေးပွဲတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတွေ ရှိခဲ့တယ်။
ပြောရမည်ဆိုလျှင် များစွာကျန်ပါသေးတယ် ။ သေချာတာကတော့ ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမအတိုင်း မနေချင်သူများ၊ စည်းစိမ်ရစ်နေသူများ၊ ရင်ထဲမှာ ဓမ္မအစစ် အမှန် မရှိဘဲလိမ်ညာလှည့်ဖျား ဂျင်းတရားဟောပြီး ဂျင်းထည့်လိုသူများ၊ လောင်းကစားမျိုးစုံနဲ့ ပျော်ပါးပြီး အချောင်နေလိုသူများဟာ ဒီမိုကရေစီခေတ်ရောက်ရင် ထိုအခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးသွားမည်ကို သိနေပါသောကြောင့် ထိုဘုန်းကြီးများသည် ဒီမိုကရေစီကို မလိုချင်ကြပါ။ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာသာ ပျော်ပျော်ကြီး နေလိုကြသူများသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဆားနည်းနည်း ပက်လိုက်သည် အနာရှိသူများ စပ်ကြစေသတည်း။
crd-မင်းသုည ( ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်)